Mitandrema amin'ny fisolokiana hita ao amin'ny Safari | Vaovao IPhone
Nahita scam iray vaovao miantraika amin'ny fitaovan'ny iOS amin'ny alàlan'ny Safari. Ity scam ity dia mampiseho fampandrenesana rafitra ary mandrisika ireo mpampiasa hiantso laharana heverina ho tsy andoavam-bola mba hamahana ny olana lazain'ny fitaovanao. Amin'ny alàlan'io antso io dia mahazo angon-drakitra ampy izy ireo hanefana ny fiainanao manokana amin'ny ambaratonga samihafa, noho izany dia tokony hanana maso iray sy iray sy iray ianao fa tsy ho voafitaka. Izao no tokony ho fantatrao mba tsy hianjera amin'ity scam tsotra ity ianao ary hialana amin'ny olana mety ho vokatr'izany.
Hatreto dia eo amin'ny fitaovana any Etazonia sy Royaume-Uni ihany io fikasana hosoka io, saingy tsy fantatray hoe rahoviana no hiampita ireo sisintany ireo. Miantso ny tenany hoe "i-phone-support.com" ilay tranonkala ary hita miharihary ny fanararaotana ny teny anglisy, noho izany dia tokony ho famantarana mazava ny fisolokianaSaingy ireo mpampiasa tsy dia mahay loatra dia mety halaim-panahy ary hanimba ny fiainany manokana. Raha vantany vao natao ny antso dia anontanian'ny mpampiasa isa miovaova izy mba hamahana ilay heverina fa olan'ny fitaovany.
Na izany aza, tsotra ny olana hialana, handeha fotsiny amin'ny menio fanovana izahay, hikorisa amin'ny fizarana Safari ary hampihetsika ny switch "windows windows".Amin'izany no hialantsika amin'ireo varavarankely fanaovana dokambarotra izay manafika ny efijery arakaraka ny tranokala iza. Na izany aza, raha tara loatra ary mihoatra ny indray mandeha dia nipoitra ny varavarankely falifaly, dia azonao atao ny mamaha azy amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny maody fiaramanidina ary hamafa ny tantara sy ny angon-drakitra tranokala Safari ao anaty menio fanovana izay efa noresahintsika tetsy ambony. Vantany vao vita izany dia manidy tanteraka ny Safari amin'ny menio multitasking sy voila izahay, vita ny olana.
Tsy vao sambany nisy karazana fisolokiana nitovy tamin'ny fitaovana iOS, satria efa niseho tamin'ny lasa tamin'ny alàlan'ny mailaka mailaka, miaraka amin'ny tanjon'ny fahazoana hatrany ny angon-drakitra manokana sy fidiran'ny mpampiasa. Azontsika antoka fa tsy haharitra ny famahana ny olana i Apple raha vantany vao fantany izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Mitandrema amin'ny fisolokiana hita ao Safari
Julio Zarazaga dia hoy izy:
Nanao ny fanadihadiana aho ary nametraka ilay karatra tamin'ny dingana manaraka. Manantena aho fa tsy manana olana.
Valiny tamin'i Julio Zarazaga